Guudmarka Ed - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Tacliinta Gaarka ah waa waxbarasho gaar ah oo u gaar ah cunugga oo aan qarash ku bixin qoysaska. Si loo helo adeegyada waxbarashada gaarka ah, carruurtu waa inay buuxiyaan shuruudo gaar ah oo ay dejiyeen Gobolka Minnesota iyo Dowladda Federaalka.
Waaxdeena Waxbarshada Gaarka ah waxay u adeegtaa qiyaastii 1,100 arday oo da'doodu udhaxeyso dhalashada ilaa da'da 21aad. Waxaan bixinaa noocyo badan oo adeeg bixin ah Ardayda badankood waxay ka helaan adeegyo iskuulka xaafadooda iyo, markay suurtagal tahay, fasalkooda caadiga ah. Moodooyinka adeegga waxaa ka mid ah adeegyada guriga-ku-saleysan ee dhallaanka iyo socod baradka, 1: 1 waxbarid, waxbarid koox yar, barashada fasalka guud ee waxbarashada iyo barashada ka baxsan goobta sida ay go'aamiyeen kooxda Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed ee Shakhsiyeed (IEP).
Shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah
Waaxda Waxbarashada Gaarka ah waxaa ku jira shaqaale khabiir ku ah shaqadooda, oo ay ka mid yihiin:
Khubarada iyo Khubarada Luqadda
Macallimiinta Waxbarshada Jirka ee Horumarinta La-Qabsiga (DAPE)
Isuduwayaasha Khibrada Shaqada
Intaas waxaa sii dheer, Waxbarashada Gaarka ah waxay bixisaa adeegyo taageero oo la jaan qaadaya:
La taliyayaasha iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka (K-12)
Xarunta Kala-wareegga Robbinsdale (da'da 18-21)
Waxbarista Guriga La Joogo
Gadiidka Gaarka ah
Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE) waxay taageeraan carruurta da'doodu udhaxeyso 0-3 ee guriga dhexdiisa ah iyo carruurta da'doodu udhaxayso 3-5 ee barnaamijyada ku saleysan iskuulka iyo bulshada. Ardayda uqalma waxbarashada gaarka ah waxay kaheli karaan adeegyo macalimiinta ECSE, dhakhaatiirta hadalka / luuqada, daaweeyaha shaqada, iyo / ama daaweeyaha jireed iyadoo kuxiran baahida shaqsiyeed ee ardayga.
Macallimiinteena waxbarashadda khaaska ah, takhasusyada la xiriira, iyo shaqaaluhu waxay si iskaashi leh ula shaqeeyaan ardayda, waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah:
Caawinta aqoonsiga ardayda naafada ah iyadoo la adeegsanayo nidaamka kooxda xirfadaha kala duwan
Hirgelinta heerarka nidaamka cadaalada iyadoo lala kaashanayo kooxda Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed ee Shakhsiyeed (IEP)
La siiyaa ardayda tilmaamaha gaarka ah ee ku habboon barnaamijka waxbarashadooda gaarka ah, iyadoo lagu saleynayo baahida la xiriirta naafonimada ilmaha
Si firfircoon uga qaybqaado horumarinta xirfadeed si aad u sii ahaato mid hadda leh qawaaniinta waxbarashada gaarka ah, qawaaniinta, qawaaniinta, iyo hababka ugu wanaagsan ee waxbarista gaarka ah
Adeegyada Kala-guurka - Fasalka 12 illaa 21 jir
Robbinsdale Transition Center (RTC) waa barnaamij waxbarasho oo gaar ah oo u adeegta dhalinyarada qaangaarka ah, ee da'doodu u dhaxayso 18-21 ee qaata adeegyada waxbarashada gaarka ah. Ardaydeena waxay leeyihiin kartiyo kaladuwan iyo naafonimo waxayna ubaahanyihiin caawimaad si looga gudbo iskuulka uguna gudba nolosha bulshada. Ardayda waxaa loo gudbiyaa RTC dugsiga aaga ay dhigtaan ee dugsiga sare. RTC waxay ardayda siisaa fursado ay ku balaariyaan shaqadooda iyo xirfadahooda shaqsiyadeed, dhisaan isku kalsooni, iyo inay wax ka bartaan is-aqbalaada iyo u-doodiddooda, sida ku qeexan Qorshahooda Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP).
Codso Ardaydaada Diiwaanada
Wadarta Nidaamka Waxbarashada Gaarka ah (TSES)
Qeybta 504 ee Sharciga dhaqan celinta
Jawaabta Faragelinta (RtI) iyo Qaybta 504: Macluumaadka iyo Su'aalaha La Weydiiyo
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay dhiirrigeliyaan adeegsiga habab wax ku ool ah oo wax looga qabanayo habdhaqanka ardayda oo dhan. Marka nidaamyada xaddidan loo shaqaaleeyo xaalad deg-deg ah arday kasta, degmo dugsiyeedku waxay u hoggaansami doontaa heerarka iyo shuruudaha Xeerka Minnesota of 125A.094: Nidaamyada Xaddidan ee Carruurta Naafada ah. Qorshaha degmadu wuxuu si gaar ah u qeexayaa liiska nidaamyada xaddidan ee dugsigu damacsan yahay inuu u adeegsado xaaladaha degdegga ah, sida dugsigu u kormeeri doono una eegi doono isticmaalka nidaamyada xaddidan, shuruudaha dukumiintiyada; qabashada Guddi Kormeer Degmo; iyo shuruudaha tababarka shaqaalaha.
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay adeegsadaan nidaamyo xaddidan oo keliya marka laga jawaabayo dabeecadda oo ka dhigan xaalad degdeg ah, xitaa haddii lagu qoro Qorshaha Waxbarshada Gaarka ah ee Ilmaha (IEP) ama Qorshaha Ka-hortagga Dhaqanka (BIP). Xaaladda degdegga ah waxaa loola jeedaa xaalad loo baahan yahay wax ka qabasho degdeg ah si looga ilaaliyo cunug ama shaqsi kale dhaawac jireed
Qorshaha Nidaamka Xaddidan, 2019-2020
Wadarta Nidaamka Waxbarshada Gaarka ah ee Gaarka ah (TSES) ee loogu talagalay Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale, ISD 281, wuxuu waafaqsan yahay Xeerka Minnesota 3525.1100. Qorshahan waxaa kale oo kujira xaqiijinta u hogaansanaanta shuruudaha dawlada dhexe ee khuseeya masuuliyadaha waxbarashada gaarka ah ee degmooyinka ee laga helo Xeerka Maraykanka, cinwaanka 20aad, cutubka 33aad, qaybaha 1400 iyo seq., Iyo Xeerka Xeerarka Federaalka, cinwaanka 34, qaybta 300. Tan dukumiintiga ayaa wehel u ah Codsiga Lacagta Waxbarshada Gaarka ah - Bayaanka Xaqiijinta (ED-01350-29).
Qaybta 504 ee Dhaqancelinta Dhaqancelintu waa sharci xuquuqaha madaniga ah ee federaaliga ah oo mamnuucaya takooridda loo geysto shakhsiyaadka aqoonta u leh naafonimada, isla markaana u dammaanad qaadda Bilaashka iyo Waxbarashada Dadweynaha (FAPE). Ardayda naafada ah waa in la siiyaa isla fursad ay uga faa'iideystaan barnaamijyada waxbarashada, adeegyada iyo waxqabadyada ay helaan asxaabtooda aan naafada ahayn. Qawaaniintaani waxay ku saabsan yihiin helitaanka fursado waxbarasho oo loo simanyahay ardayda naafada ka ah caafimaadka ama maskaxda.
Qaybta 504 kaliya ma mamnuucayso takoorka bixinta adeegyada waxbarashada, laakiin sidoo kale waxay mamnuucaysaa takoorida qaabka dhibaataynta naafonimada darteed iyo qaab aargudasho, cabsi gelin, qasab ama hanjabaad ah soo tebinta takoor ku saleysan naafonimada qofka. Qaybta 504 waxay bixisaa waafajin ka kooban goobta waxbarashada guud. Ma bixiso adeegyo waxbarasho oo khaas ah.
Si aad ugu qalanto ilaalinta Qaybta 504, shaqsi u qalma waa inuu lahaadaa (1) naafonimo jireed ama maskaxeed (2) oo si weyn u xadideysa (3) waxqabad nololeed oo weyn. Dhammaan saddexda shuruudood waa in la buuxiyo. Go'aanka ah in ardaygu qabo cillad jireed ama maskaxeed oo si weyn u xadideysa waxqabadka ugu weyn ee nolosha waa in lagu sameeyaa iyadoo lagu saleynayo baaritaan shaqsiyeed.
Haddii ay jirto sabab loo aamino naafonimo darteed ardaygaagu wuxuu u baahan yahay waafajin, fadlan la xiriir dugsiga ardaygaaga. Isku duwayaasha iskuulka 504 ayaa laga heli karaa iskuul kasta.
Habka Qiimeynta iyo Jadwalka
U Diritaanka Qiimeynta
Dhammaan ardayda dhigata Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxaa lagu taageeraa qaab-dhismeedka Jawaab-celinta (RtI) kaas oo bixiya istiraatiijiyado waxbarid lagu caddeeyey inay buuxinayaan baahiyaha waxbarasho ee kala duwan ee ardaydeena, oo ay weheliso heerarka faragelinta ee ardayda u baahan taageero dheeraad ah.
Macluumaad dheeraad ah oo gaar ah oo ku saabsan qaabdhismeedka RtI ee ka jira dugsigaaga, iyo wax ka qabadka suurtagalka ah, fadlan la hadal macallinka ilmahaaga (dugsiga hoose) ama la taliyaha (dugsiga sare).
Fahamka Jawaabta Faragelinta (RtI)
Istaraatijiyadaha waxbaridda ee Tier I waxay u muujiyeen waxtar ardayda badankood waana qeyb ka mid ah waxa aan u qabanno ardayda oo dhan. Macallimiinta fasalka waxaa laga filayaa inay u soo bandhigaan macluumaadka siyaabo kala duwan, u isticmaalaan xoojin togan oo ay ku wareegaan qolka inta ay wax barayaan si ay uga warqabaan baahiyaha shaqsiyeed, iyagoo siinaya taageero shaqsiyeed, dardar gelin iyo dib u jeedin sida loogu baahdo. Waxqabadyada ka jira Tier I ee ka dhacaya fasalka guud, ayaa diyaar u ah dhammaan ardayda, waxayna siisaa taageerada lagama maarmaanka u ah 80% ardaydeena inay guuleystaan. Ardayda u baahan fadhiga mudnaanta leh, jeegaga la bartilmaameedsaday ee fahamka fasalka, taageerada abaabulka ama waqti dheeri ah oo imtixaannada ah, tusaale ahaan, waxay lahaan karaan baahiyahaas oo ah qaabkeenna Tier I.
Wax ka qabadka Tier II waa mid aad u xoogan oo amar ah waxaana laga yaabaa inay ubaahan yihiin ilaa 15-20% ardayda ardayda ah ee aan ku guuleysan waxbarida iyo Tijaabinta Tier I kaliya. Ardayda muujiyey baahida loo qabo waxqabadyada Tier II ayaa looga wada hadlayaa kulanka kooxda si loo go'aamiyo mid ka mid ah waxqabadyada Tier II ee shaqsi ahaaneed ee bixin kara taageerada lagama maarmaanka ah. Wax ka qabadka Tier II wuxuu caadi ahaan la dhacaa kooxo yar yar oo arday ah waxaana lagu bartilmaameedsadaa baahi la aqoonsaday.
Waxqabadyada Tier III ayaa ah kuwa ugu daran dabeecadda, waxaana laga yaabaa inay ubaahan yihiin ilaa 5% ardayda ardayda si ay u taageeraan guusha tacliinta. Marka waxqabadyada Tier III loo baahdo, koox yar oo macallimiin ah iyo hawlwadeenno taageera ayaa go'aamiya ka-hortagga (yada) ugu habboon baahiyaha la aqoonsaday ee ardayga.
Fahamka Qaybta 504
Qeybta 504 waa qeyb ka mid ah Sharciga Dhaqancelinta ee 1973 kaasoo ka ilaaliya dadka naafada ah takoorka. Iskuulka dhexdiisa, Sharcigan Xuquuqda Madaniga wuxuu hubinayaa ardayda naafada ah in la siiyay fursad ay ku helaan fursado waxbarasho iyo kuwa manhajka ka baxsan oo la mid ah tan dhiggooda aan naafada ahayn (1). Dugsiyada Aagga Robbinsdale, qaab dhismeedka RtI wuxuu si guul leh u taageeraa ardayda badankood, oo ay ku jiraan kuwa naafada ah. Qeybta 504 ee Fursadda Waxbarashada Sinnaanta (EEOP) ayaa loo abuuri karaa ardayda naafada ah ee u baahan isbeddelada barnaamijka ee ka baxsan waxqabadyada RtI ee ay heli karaan dhammaan ardayda (2).
Qiimaynta iyo Go'aaminta U-qalmitaanka Qaybta 504
Qiimeynta sida ku cad Qeybta 504 waxay ku lug leedahay xog ururin laga sameeyo iskuulka hada iyo diiwaanada caafimaadka si loo sameeyo
go'aan ka gaadho haddii naafonimada ilmuhu ka horjoogsanayso isaga ama iyadu inay galaan barnaamijka waxbarashada ama ay gaadhaan waxbarasho
natiijooyinka sida asxaabta caadiga ah. Kooxda 504 ayaa go'aamin doonta u-qalmitaanka ilaalinta iyo adeegyada sida ku xusan Qeybta 504 by
tixgelinta saameynta naafonimada ee tacliinta, gaaritaanka, xaadiritaanka, dhaqanka iyo la dhaqanka dadka kale.
Go'aaminta u-qalmitaanka waa in la sameeyaa iyada oo aan loo eegin tallaabooyinka yareynta (1).
Waa maxay Qiyaasta Qiyaasta?
Qiyaasta Yaraynta ayaa ah waxyaabaha u dhaqma si loo yareeyo ama looga takhaluso waxyeelada naafonimada, oo ay ku jiraan daawada, taageerada RtI, qorshooyinka caafimaadka, iyo taageerada ka baxsan dugsiga. In kasta oo tallaabooyinka yareynta aan la tixgelin karin marka la go'aaminayo haddii qofku leeyahay naafonimo, waxaa loo tixgelin doonaa go'aaminta haddii EEOP ay lagama maarmaan tahay in laga fogaado takoorka (3). Qeybta 504 looguma talagalin in lagu weyneeyo kartida shaqsiyadeed laakiin taa bedelkeeda si loo hubiyo in ardayga naafada ah uu awood u leeyahay inuu helo barnaamijyada waxbarashada si ku filan sida asxaabta aan naafada ahayn. Ardayga naafada ah wuxuu noqon karaa qof uqalma sida uu qabo Qeybta 504 xitaa haddii Qaybta 504 EEOP aan looga baahnayn inay hubiso takoor la'aan.
Ma jiraan wax naafonimo ah oo si otomaatig ah ugu qalma arday badbaadin sida ku cad Qeybta 504?
Maya. Naafadu waa inay si weyn u xadideysaa hal ama in ka badan oo ah waxqabadyada waaweyn ee nolosha.
Baadhis caafimaad ma ku filan tahay inuu u qalmo u qalmitaanka Qaybta 504?
Maya. In kasta oo baaritaanka caafimaad ee dhakhtarku ku filan yahay diiwaangelinta naafonimada, dugsigu waa inuu sameeyaa qiimeyn 504 sida kor lagu sharaxay.
Waa maxay barnaamijyada isbeddelka ah ee loo heli karo ardayda iyada oo loo marayo EEOP?
EEOP kasta waxaa loo qoraa inuu wax ka qabto baahiyaha gaarka ah ee ardayga u qalma. EEOP waxay sharxi doontaa waxqabadyada, taageerooyinka iyo xeeladaha waxbarida ee lagama maarmaanka u ah ardayga inuu galo barnaamijka ama inuu gaaro natiijooyin waxbarasho sida asxaabta caadiga ah, isagoo kusii jira fasalka caadiga ah. Wax ka qabadka iyo taageerooyinka ay heli karaan dhammaan ardayda iyada oo loo marayo Qaab dhismeedka RtI ayaa sii wadaya helitaanka ardayda uqalma qaybta 504 umana baahna ka mid noqoshada EEOP.
Mar haddii ardayga loo aqoonsado inuu u-qalmo sida ku cad Qaybta 504, ardaygaasi marwalba ma u qalmaa?
Maya. U qalmitaanka ardayga ee hoos timaada Qaybta 504 oo u baahan Qeybta 504 Plan waa in dib loo qiimeeyaa xilliyo; badiyaa intaan ardaygu u wareegin dugsi cusub.
Waa maxay nidaamka la codsado iyo waqtiga la qabanayo si loo dhamaystiro qiimaynta?
In kasta oo jadwalka cayiman ay ku kala duwanaan karaan hadba duruufaha shaqsiyeed, hanaanku wuxuu raacayaa taxanahan guud:
Kadib marka waalid, ilaaliye ama wakiilka ardayga ay soo gudbiyaan codsi qiimeyn ah oo ay la socdaan dukumiinti caafimaad oo lagama maarmaan ah ama siideyn macluumaad ah, iskuulku wuxuu ku siin doonaa jawaab qoraal ah codsiga 15 maalmood oo dugsi gudahood. Jawaabaha oo dhan waxaa ka mid noqon doona Ogeysiiska Nidaamka Badbaadada oo sharaxaya xuquuqda Waalidka / Ardayga eek u xusan Qeybta 504, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan sida racfaan looga qaadan karo go'aan kasta oo degmo. Degmadu waxay dib u eegi doontaa codsiga waxayna kaga jawaabi doontaa mid ka mid ah go'aamada soo socda:
1. Qiimeynta waa la WADA QAADAN doonaa waxaana lagu dhammeeyaa 45 maalmood oo dugsi. Dugsigu wuxuu ururin doonaa macluumaad laga helo diiwaanka tacliinta, indha indheynta shaqaalaha iyo waxqabadyadii hore. Kooxda Qaybta 504 ee dugsiga (oo ay ku jiraan xubnaha shaqaalaha ee aqoonta u leh ardayga), ayaa dib u eegi doona xogta qiimeynta si loo go'aamiyo u-qalmitaanka ilaalinta iyo / ama adeegyada ee hoos imanaya Qaybta 504.
2. Codsiga in la qiimeeyo waxaa la saaray ON HOLD halka dugsiguna uu dhigayo heerar dheeri ah oo taageero ah isla markaana la qiimeynayo jawaabta ardayga ee faragelinta Tiers I iyo II.
3. Codsiga qiimeynta waa DENIED  Dugsiga ayaa bixin doona qoraal kooban oo ku saabsan sababaha diidmada. Haddii ardaygu u-qalmo barnaamijka inuu beddelo sida ku cad Qaybta 504, Qorshaha Fursadda Waxbarashada loo Sinaado (EEOP) ayaa la abuuri doonaa iyadoo ay kaashanayaan kooxda Qaybta 504 ee dugsiga.
Yaan kala xiriiri karaa si aan u helo macluumaad dheeraad ah?
Dhismaha Maamulaha Dacwada 504: La xiriir dugsigaaga
Dhismaha Maamulka 504: La xiriir dugsigaaga
Degmada 281 504 Isuduwaha: Marti Voight, Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah, 763-504-8070
Tixraacyo iyo ilo
(Waxaa lagu heli karaa dib-u-eegista Xarunta Adeegga Waxbarashada, 4148 Winnetka Ave. N, New Hope, MN)
1 Buugga u hoggaansamida ee Qaybta 504 ee Xeerka Dhaqancelinta ee 1973, Waaxda Waxbarashada MN
2 Su'aalo iyo Jawaabo oo ku saabsan Qaybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta, Booth & Lavorato LLC (2013).
3 Warqad Qaali ah oo Shaqaale ah, Xafiiska Xuquuqda Madaniga, Janaayo 19, 2012, 58 IDELR 79, 44 NDLR 153, 112 LRP 3621
Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo ee ku saabsan Qaybta 504 iyo Waxbarashada Carruurta Naafada ah, ayaa laga heli karaa www.ed.gov .
Sharciga Wax ka beddelka Sharciga Naafada Mareykanka ee 2008 (ADAAA), Booth Law Group LLC, www.boothlawgroup.com .
Afeef: Qalabkan looguma talagalin mana ku darido ama ka jaro wixii shuruudo ah ee kale ee lagu dabaqi karo ee ku jira sharci kasta oo federaal ama gobol. Sidoo kale looguma talagalin inay sharxaan dhammaan shuruudaha sharci ee khuseeya carruurta naafada ah. Agabkan waxaa loogu talagalay inay waalidiinta siiyaan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan taageerooyinka ardayda naafada ah ee laga heli karo qaybta 504 ee dhaqan celinta. Macluumaadka iyo agabyada halkan ku xusan waxaa loo bixiyaa ujeedooyin sawir leh oo si gaar ah looma oggola ama looma oggolaanin Xafiiska Xuquuqda Madaniga.
Dugsiyada Robbinsdale Area iskuulku ma taageerayo ama kafaala qaadayo mid ka mid ah kheyraadka / xiriiriyeyaasha ku taxan.
Xarunta Metropolitan ee Nolosha Madaxa-bannaan , 651-646-8342
STAR (Nidaamka Tiknoolajiyadda lagu gaarayo Natiijooyinka) , 651-201-2640
Arc Minnesota , 952-920-0855
Xarunta Sharciga Naafada ee MN , 612-332-1441
PACER , 952-838-9000
Adeegyada Maskaxda ee Xanuunada daran , 612-873-3161
Caawinta Daryeelka Caafimaadka , 612-596-1300
Lambarka Bulshada , 1-800-772-1213
United Way , 651-291-0211
Carruurta iyo Dhallinyarada leh Baahiyaha Caafimaadka Gaarka ah (CYSHN) , 651-201-3650
Caafimaadka Maskaxda ee Degmada Hennepin , 612-348-4111
Waxbarashada Qoyska iyo Taageerada
Dugsiyada Carruurnimada Hore ee Waxbarashada Robbinsdale Area (ECFE), 763-504-4170
Ururka Maqalka-Luqadda-Hadalka Mareykanka (ASHA)
Ururka Autism ee Minnesota
Ururka Down Syndrome ee Minnesota
Degmo Dhex-dhexaad ah 287
Ururka Naafada Waxbarashada ee Minnesota
Gacmaha iyo Codadka Minnesota
Ciyaaraha fudud ee Robins
United Cerebral Palsy ee Minnesota
Windows ee Fursadda